Ukudlala iPiano ngesandla sakho sasekhohlo, nako
Isandla sakho sasekhohlo sidlala indima exhasayo xa ukwipiyano. Kodwa nangona ingahlali idlala ingoma, isandla sakho sasekhohlo songeza amanqaku amanqaku kunye nokuhambelana.
Ukuba ucinga umndilili C ophakathi kwepiyano, udlalela ngokudlala amanqaku angaphezulu embindini C ngesandla sakho sasekunene nalawo angezantsi kumbindi C ngasekhohlo. Abasebenzi abaphantsi sisiseko sebhasi.
Ezona ndawo zixhaphakileyo nezonwabisayo zokuqala indawo yesandla sakho sasekhohlo zizipili ezo zasekunene kwakho:
C isikhundla: I-pinky yakho yasekhohlo (ekwabizwa ngokuba yi-LH5) kwi-C kwi-octave ezantsi embindini C. Eminye iminwe yesandla sakho sasekhohlo ihleli kufutshane no-D, E, F, no-G ngokulandelanayo.
Isikhundla G: I-LH 5 yehla iye ku-G, umgca wabasebenzi, kunye neminye iminwe yakho ihamba ngokufanelekileyo.
Isikali ayizizo ezona zinto zinomdla wokudlala, kodwa ngokudlala isikali sasekhohlo ngokungazi kakuhle ezi zinto zilandelayo zomculo:
Ukufunda ibass clef
Ukudlala ngeminwe echanekileyo
Sebenzisa iipateni ezintle kunye nokuhambelana
Ukuqonda ukuba uphulukene kangakanani nokudlala ngesandla sasekunene
Ungasebenzisa umnwe ofanayo, kokubini phezulu nasezantsi kwisikali, kuwo onke amanqanaba kweli nani lilandelayo. Isikali esikhulu se-C asinabukhali okanye iiflethi, iG enkulu inesitshixo esinye, kwaye enkulu iF ineflethi enye.
C, G, kunye no-F izikali ezinkulu zesandla sasekhohlo.
Njengokudlala kwesandla sasekunene, sebenzisa iminwe echanekileyo njengoko kubonisiwe ngamanani angasentla kwenqaku ngalinye. Uyenza njani kwaye xa uwela iminwe yakho kubaluleke kakhulu ekufumaneni isandi esigudileyo kunye nobuchule besandla sasekhohlo.
idosi ephezulu ye-buspar
ukusetyenziswa kwexesha elide kwe-mucinex
Isebenza njani i-metamucil
ukubiza njani phambili kwi-Android
ungayinqandi njani umntu kwi-twitch
Ingalo enye yedumbbell umqolo
I-drospirenone kunye ne-ethinyl estradiol